Juventus Oo Paul Pogba U Soo Bandhigtay Heshiis Uu Todobaadkii Ku Qaadanayo Lacag Aan Caadi Ahayn.
HomeWararka CiyaarahaJuventus oo Paul Pogba u soo Bandhigtay Heshiis uu todobaadkii ku qaadanayo Lacag aan Caadi Ahayn.
Xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Man United ee Paul Pogba ayaa lagu soo waramayaa in loo soo bandhigay heshiis uu todobaadkii ku qaadanayo 160,000 oo Gini si uu beeca xorta ah ugu laabto kooxda Juventus xagaagan.
29-sano jirkaan ayaa qandaraaskiisa haatan ee Manchester wuxuu dhacayaa dhamaadka bisha June, waxaana si weyn loo filayaa inuu ka tago kooxda 20-ka jeer heysata horyaalka Ingariiska si uu u raadiyo daaq cusub.
Paris Saint-Germain ayaa wali si aad ah loola xiriirinayaa xiddiga heerka caalami ee dalka France, halka warbixin dhawaan soo baxday ay sheegtay in Real Madrid aysan meesha ka saarin keenista Bernabeu xagaagan.
Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay The Mirror , Juventus ayaa ugu cadcad ku guuleysiga Koobka Adduunka, iyagoo u soo bandhigaya qandaraas ku kacaya 160,000 oo ginni todobaadkii si uu ugu soo laabto kooxda.
Warbixinta ayaa sheegeysa in heshiiska la soo jeediyay uu sidoo kale ku jiri doono gunno weyn iyo lacago saxiix ah, iyadoo kooxda reer Talyaani ay go’aansatay inay dib ugu soo celiso Turin.
Juventus ayaa lagu eedeeyay in ay doonayso in ay kooxdeeda ku dhisto Pogba iyaga oo u arka mid ka mid ah xiddigaha ugu horeeya khadka dhexe ee kubada cagta adduunka inkasta oo uu ku dhibtoonayay Man United.
Laacibka reer France ayaa horay u matalay Marwada Duqda ah intii u dhaxeysay 2012 iyo 2016, isagoo si xor ah uga yimid Red Devils, wuxuuna kula guuleystay afar horyaal oo Seri A ah iyo labo Coppa Italia xilli uu guulo gaaray.
Pogba ayaa 178 jeer u soo muuqday Juventus waayihiisa hore ka hor inta uusan dhameystirin lacag badan oo uu ugu soo laabtay Man United xagaagii 2016.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ayaa 233 kulan u saftay Red Devils labo xilli oo kala duwan, laakiin wuxuu si weyn ugu dhibtooday inuu soo bandhigo sumcaddiisa tan iyo markii uu ku soo laabtay Old Trafford lix sano ka hor.